MOVANSY RAVALOMANANA : hanohy ny hetsika eny Antanimena kely Ankorondrano – MyDago.com aime Madagascar
Nihaona tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny tranon-dRamatoa Lalao Ravalomanana teny Faravohitra ny tolakandro 20 Aogositra teo ny movansy Ravalomanana. Tazana teny an-toerana ny filohan’ny kogresin’ny tetezamita Rakotoarivelo Mamy, ny filoha lefitry ny Cst Razafimanantsoa Hanitra, Andriamatoa Mahafaritse Samuel, ary ny Rev Satrobory. Ny mahakasika ny hetsika saika ho tanterahana teny Ambohijatovo androany maraina no niompanan’ny resaka tamin’izany. Nilaza ary Rakotoarivelo Mamy fa rehefa natao ny fanelanelanana isan’ambaratonga rehetra tamin’nympitondra fanjakana nefa tsy nahazo alalana hanao izany eo Ambohijatovo izahay miaraka amin’ireo vahoaka. Tsy tanteraka ny hetsika androany hoy izy izay hetsika hanoherana ny didy navoakan’ny CES hanalana ny kandidàn’ny movansy Ravalomanana. Maro be hoy Mamy ny antso avy any amin’ny vahoaka milaza fa aleo tsy tohintohinina ny fandehanan’ny fanadinana bakalorea. Nieritreritra izahay hoy izy hoe aleo ajanona mba tsy ho eritreretin’ny olona fanakorontanana no ataon’ny movansy Ravalomanana amin’izao hetsika izao fa tena fanehoan-kevitra madiodio, tsy misy korontana ao anatin’ny filaminana. Rehefa nandinika sy nandanjalanja izahay hoy izy dia nanapakevitra fa tsy ho atao ny fanehoankevitra androany fa mbola atao amin’ny fotoana manaraka. Anisan’ny sakana amin’ny fidinanay eny Ambohijatovo hoy ity olomboantendry ity ireo manamboninahitra ambony avy ao amin’ny zandarmariam-pirenena. Rehefa natao ny fifampidinihana dia tsy tsara raha atao eto am-povoan-tanàna satria raha sanatria misy mpanakorontana.
Eny Antanimena kely Ankorondrano
Ny tanjona heverinay hoy Mamy Rakotoarivelo manomboka rahampitso dia ny hetsika dia atao eny Antanimena kely ampitan’ny fiangonana Jesosy Mamonjy Ankorondrano. Izahay hoy izy dia mametraka antoka mazava tsara fa tsy hisy avy aty aminay ny korontana, fa tena haneho hevitra an-kalalahana no ataonay entina hanoherana iny fanapahankevitry ny CES iny. Manome toky izahay hoy Mamy fa tsy hivoaka ny toerana nomen’ny fanjakana amin’io hetsika io. Ny fahazoan-dàlana dia efa napetraka eny amin’ireo tomponandraikitra isan’ambaratongany. Noho izany dia miantso ny vahoaka Malagasy rehetra ho tonga maro rahampitso amin’io hetsika eny Antanimena kely Ankorondrano io, haneho ny tsy fankasitrahana ny didy navoakan’ny CES.
Fiarahamiasa amin’ny movansy Rajoelina
Politika no atao hoy izy ka mety hisy ny firesahana kanefa hatreto aloha dia tsy misy izany fiarahana amin’ny movansy Rajoelina. Tsy azo sakana ihany koa anefa hoy izy ny mety hisian’izany zavatra izany satria ny tanjona mitovy di any fampiatoana ny didy navoakan’ny CES iny.Nahatonga anay hoy Mamy hanao ny hetsika androany dia satria tamin’ny Sabotsy no nivoaka ny didin’ny CES, ka tsy maintsy manao reaction haingana mbna ho fantatry ny fikambanana iraisam-pirenena fa marobe ny vahoaka tsy Mankato iny didy iny. Tsy hanao antery izahay fa hiresaka amin’ny tomponandraikitra rehetra am-pilaminana.
Ankoatra izay dia nambarany fa efa hametram-pialana ato atao ny solontenan’ny movansy Ravalomanana ao anatin’ny CES. Efa vonona ny taratasy fametraham-pialana fa ny fametrahana izany sisa no andrasana. Momba ny fialan’ny movansy Ravalomanana ao anatin’ny tetezamita dia mbola eo am-pandinihana izany izahay hoy izy ka ho hita eo.
Marihina fa nitohy teny amin’ny Magro Behoririka araka izany ny hetsika nataon’ny movansy Ravalomanana ny harivan’io.
CT sy CST Ankolafy Ravalomanana : Hanohy ny hetsika eny Ambohijatovo
MAMY RAKOTOARIVELO : TOKANA NY PLAN NY MOVANSY RAVALOMANANA DIA I NENY IHANY
5 pensées sur “MOVANSY RAVALOMANANA : hanohy ny hetsika eny Antanimena kely Ankorondrano”
21 août 2013 à 6 h 47 min
DESOBEISSANCE NO HILAINA ,ianareo angaha tsy mpitondra fanjakana,misy ministra ianareo ,ETO ,ny vahoaka tsy hakantoa io FITONDRANA mpanjuanaka io .
21 août 2013 à 7 h 04 min
Mahonena e: ireo « donga mpiara miasa @ domelina ireo » efa manao tsipy baolina afahafa izany ka iza sisa no hanampy an’i Dada sy Neny e???
Efa handitsahany frantsay an-tampon-doha izao ka dia mbola hifampiandry sy hivavaka sy ho hanaiky alikaina ve e?
Misy ihany ve ny lehilahy malagasy sa tapitra niaraka t@ zoky ray amandreny 1947 ?
ny tanjona indray eto dia » hiaraka @’ i domelina » mody hanohitra ny CES miaraka mba
HANASAMASAMAHANA ILAY VAHOAKA INDRAY??????
EFA VOATSOKA KOA I NENY, EFA VOKY MILLIARA VAO MODY HIALA????????
MIHEVITRA OLONA DIA EFA TENA………….
Ilay FANJAKANA tiany tenenina eto dia tsy iza fa i DOMELINA,ilay nekeny nanaovany sonia.
Dia ity hetsika koa efa HARIRARIRA sahady ilay vahoaka, tampontampoka eo dia ARY efa hainy tsara anefa
fa Ambohijatovo dia efa TSY AZO HITSAHINA an!!! DĖ GAGA ELAH!!!!!!!
RAHA IZAO SAHADY ALOHA DIA EFA FANTATRA NY FIAFARAN’ITY TOLONA fa HANJAVONA TOY NY EFA
Mieritrereta tsara ianareo mpitarika ao amin’ny movansy Ravalomanana fa tsy « amboa »-nareo akory sanatria ny olona niaritra fahoriana nandritra izay 4 taona izay ka arirarira toy izao, rehefa hoe tairina dia tairina tokoa, tsy mila autorisation, tsy mila fampitandremana fa atao izay tokony atao, izay tsy maintsy atao, fa tsy be resaka eo. Mba mahaiza mandamin-javatra e! ianareo ve no atoro an’izany, fa rehefa tsy mahavita na tsy mahay na tsy mahasahy dia mialà fa maha-be entana fotsiny. Dia marina mihitsy ilay filazana eo ambony io hoe mba misy ihany ve ny lehilahy malagasy? sa sarim-bavy daholo?
Fa ngah foana indray ilay hetsika saika natao tany Ankorondrano androany? hahahahahahah
Précédent Article précédent : Ankolafy Ravalomanana : Hidina an-dalam-be ho etsy Ambohijatovo
Suivant Article suivant : Fanambarana